FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHETLAND SHEEPDOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shetland Sheepdog
Sheltie the Shetland Sheepdog amin'ny faha-7 taonany
Lisitry ny Shetland Sheepdog Mix Dogs
Mpiandry Scotch Dwarf
Ny Shetland Sheepdog dia toa dika mitovy kely amin'ny Collie mifono volo . Rehefa jerena avy eo amin'ny sisiny, ny loha dia toa vodin-tsoavaly, miaraka amin'ny somotraviavy mihidy avy eo amin'ny sofina ka hatrany amin'ny orona. Misy fijanonana kely. Mihaona amin'ny hety na manaikitra ny nify. Mainty ny orona. Maizina anefa ny maso miendrika amandy, maso manga dia afaka miseho amin'ny palitao manga merle. Ny sofina kely dia miarina 3/4 miaraka amin'ireo tendrony mihetsiketsika mankany aloha. Ny vozona dia arched sy hozatra. Volom-borona ny rambony lava, entina miakatra ambany, na miolakolaka miakatra kely. Ny rambony dia tokony hahatratra ny hock. Esorina indraindray ny demclaws. Ny palitao roa sosona dia lava sy be dia be manerana ny vatana, saingy fohy kokoa ny lohany sy ny tongony, ary ny palitao dia mamorona boribory manodidina ny hatoka sy tratra. Ny palitao ivelany dia mahitsy sy masiaka raha mikasika azy, ary ny palitao dia malefaka sy tery. Ny loko palitao dia misy manga merle, sable ary mainty miaraka amin'ny fotsy sy / na volomparasy.
Ny Shetland Sheepdog dia tsy mivadika, vonona ary maniry ny hampifaly, manao alika mpiara-miasa mahafinaritra. Fampianarana sy fanairana amin'ny toetra milay. Be fitiavana, tsy mivadika ary be fitiavana amin'ny fianakaviany, mila olona ity karazana ity. Araraoty tsara manomboka amin'ny puppy. Mpiambina sy mpiambina tsara izy io. Mahatsapa ny feon'ny feonao ireo alika ireo dia tsy hihaino raha mahatsapa ianao fa tsy midika hoe izay lazainao, ary tsy hihaino koa raha masiaka loatra ianao. Mila ny tompony izy ireo mba ho tony, nefa hentitra. Tokony hotezaina ao amin'ny trano misy ny olombelona izy ireo matoky tena, tsy miovaova, mpitarika fonosana . Tena manan-tsaina, velona ary mora zahana, ny Shetland Sheepdog dia iray amin'ireo karazan-java-kendry indrindra. Miaraka amin'ny faharanitan-tsaina no ilaina ny hibahana ny sain'izy ireo. Tian'izy ireo ho variana foana izy ireo. Ny Sheltie dia mihoatra ny mpiompy marani-tsaina rehetra, izay sady mahay baikon'ny omby lehibe no mitazona ondry kely. Ny fahatsapana fiompiana dia mbola matanjaka be amin'ny maro amin'izy ireo. Tian'izy ireo ny manenjika zavatra. Ampianaro tsy hanenjika fiara ity alika ity. Ny Sheltie dia tsy tokony avela hihazakazaka afaka eo akaikin'ny arabe satria mety manapa-kevitra ny hanenjika fiara na zavatra hafa hitany ampitan'ny arabe izy io, mety hitera-doza mety ho voadonan'ny fiara. Noho ny hatsaran-tarehiny sy ny hatsaram-panahiny, dia lasa alika mpiara-miasa malaza ny Sheltie. Aza avela hino ity alika ity fa mila mitantana ny tranonao izy, na maro olan'ny fitondran-tena hanomboka hivoatra. Mety hanjary hiahiahy amin'ny olon-tsy fantatra izy ireo, indrindra amin'ny ankizy. Mety tsy hamela ny tenany hikasika ny olon-tsy fantatra izy ireo ary hampiseho ny fimonomononanany mitabataba, satria miteny amin'ny olombelona izy ireo mba hamela azy ireo irery. Mety hitarika amin'ny fiambenana , mikitika ary manaikitra mihitsy aza. Mety hiafina ao ambadiky ny zavatra iray izy ireo, mibontsina hatrany rehefa tonga ny orinasa. Mila ambara amin'ny alika fa tsy fitondran-tena ekena izany. Ireo toetra ratsy ireo dia tsy toetran'i Sheltie, fa tsara kokoa Syndrome kely alika , fitondran-tena ateraky ny olombelona izay inoan'ny alika fa izy dia mpitarika ho an'ny olombelona. Niovaova ny diplaoma an'ny fihetsika ratsy vokany rehefa mahatsapa ny alika fa izy dia mpitarika fonosana olombelona ary tsy maintsy mitazona ny olombelona AZY milahatra. Ireo toetra ratsy ireo dia hihena raha vantany vao manomboka mampiseho ny fitarihana mety ny olona manodidina ny alika mandeha isan'andro ny fonosana hanamaivanana ny angovo ara-tsaina sy ara-batana.
chesapeake bay retriever sy lab mix
Hahavony: 13 - 16 santimetatra (33 - 40,6 cm)
Lanja: 14 - 27 pounds (6.4 - 12,3 kg)
Tahaka ny Rough Collie, dia misy fironana mankany amin'ny tsy fahasalamana nolovaina sy ny areti-maso. Ny tsipika sasany dia mety ho mora voan'ny hypothyroidism sy ny famindrana ny patella (kneecap), izay heverina fa lova. Aza mora be loatra ny mahazo lanja mora foana. Ny alika mpiandry sasany dia mitondra ny tsimokaretina MDR1 izay mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny zava-mahadomelina sasany izay tsy maninona raha manome alika hafa, fa raha voasedra tsara ho an'ity fototarazo ity dia mety hahafaty azy ireo.
Ny Sheltie dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary tsy maninona raha tsy misy tokontany.
Ity alika miasa sy mahafinaritra ity dia mila fanatanjahan-tena betsaka, izay misy isan'andro MANDEHANA na jogging. Hahafinaritra azy ireo ihany koa ny mihazakazaka afaka, fa alao antoka fa any amin'ny faritra azo antoka ny alika.
antsasaky ny heeler manga antsasaky ny sisintany collie
Mora karakaraina kokoa ny palitao noho izay antenainao, fa ny fanosorana matetika no zava-dehibe. Atsofohy amin'ny rano ny palitao alohan'ny hanombohanao ary esory ny tsihy alohan'ny haharatsy azy, fa ampiasao kely ilay tohotra. Ity karazana ity dia mpantsaka mavesatra ara-potoana. Ny palitao matevina dia alatsaka indroa isan-taona: amin'ny lohataona sy amin'ny fararano. Ny palitao dia manary ny loto sy ny fotaka ary ny fialokalofana dia tsy azo antoka momba ny fahadiovany. Mandrosoa na shampooing maina raha tsy ilaina izany.
Ny Shetland Sheepdog dia mifandray amin'ny Rough Collie , samy alika avy Kolontsaina sisintany izay nonina tany Ekosy. Ny Border Collies dia nentina tany amin'ny nosy Skotika Shetland ary niampita niaraka tamin'ny Islandy Yakkin, alika kely nosy izay ankehitriny lany tamingana . Tamin'ny 1700 dia novolavolaina tanteraka ny Sheltie. Ireo alika dia nampiasaina niambina sy niambina ny andian'ny ondrin'i Shetlands. Ity mpiasa vonona ity dia nalemy fanahy tokoa rehefa niandry ny tahiry kely. Ny Shetland Sheepdog dia fantatra voalohany tany Angletera tamin'ny taona 1909 ary ny AKC tamin'ny 1911. Ny Sheltie dia iray amin'ireo alika mpiara-miasa malaza indrindra ankehitriny. Mahay izaitsizy tokoa, miavaka amin'ny fifaninanana fankatoavana. Ny sasany amin'ireo talentan'i Sheltie dia misy: fanarahan-dia, fiompiana, mpiambina, fiambenana, hakingana, fankatoavana mifaninana ary fanaovana hafetsena.
Ny nofinofin'i L-N-D tao amin'ny MIST CGC aka TURTLE ilay vita amin'ny Blue-biru Sheltie tamin'ny 2 taona— ' Mampiseho fampifanarahana ny fano, fa ny lehibe indrindra dia zanako izy. Tiany ny milalao baolina amin'ireo Shelty hafa ao an-trano. Hitsambikina eo am-pelatanako rehefa mangataka azy aho. Simba araka izay tratrany izy. ' Sary natolotry ny L-N-D Shelities
mix mixie collie alemana amidy
Dan Hocker the Sheltland Sheepdog amin'ny 1 taona— 'Lehilahy be fitiavana Sheltie izy, izay tia mandry amin'ny zanakay lahy, tia mandray baolina ary tia mandro.'
Brandi the Shetland Sheepdog amin'ny faha-6 taonany— 'Brandi dia alika mahafinaritra ary mety amiko.'
Manenjika ny zanak'alika Sheltland Sheepdog amin'ny 5 volana
'Ireto ny aliko roa: Beau (amin'ny ankavia) sy Teddy Bear (eo ankavanana). Nalaiko ity sary ity tamin'izy 15 taona teo ho eo. Rahalahy izy mirahalahy ireto ary tian'izy ireo ny miara-mipetraka amiko amin'ny toeram-piompiana. Izy ireo dia trano fialofana voasoratra anarana AKC. Mahazo fanatanjahan-tena betsaka araka izay ilainy avy amin'ny 60 hektara manodidina ny tranoko izy ireo. Alika mahavariana ireto roa ireto. Tsy manaikitra na mipaka mihitsy izy ireo ary mahafinaritra amin'ny ankizy kely. Mianatra haingana dia haingana izy ireo. Samy tia milalao biby hafa eto izy ireo, dia ny saka , alika hafa ary ny Goat . Miandry ny hampahafantatra azy ireo ny omby mandra-pahatonga azy ireo hihalehibe, ka fantatr'izy ireo fa tsy tokony hifangaro amin'izy ireo. '
Shelities, Axl ary Casa: 'Miankina amin'ny fitsaboana, afaka miarahaba 5 minitra max isika!'
Shelities, Axl ary Casa: “Tianay ny torimaso tolakandro!”
Shih Tzu Mix amin'ny yorkie alika kely
Charlie the Shetland Sheepdog amin'ny faha-7 taonany
Mollie tokony ho 5 volana
Yogi the Shetland Sheepdog toy ny alika kely amin'ny 8 herinandro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Sheltie
Sarin'i Sheltie 1
Sarin'i Sheltie 2
Sarin'i Sheltie 3
Sarin'i Sheltie 4
pitbull alika mainty sy fotsy
mpiandry alemanina afangaro alika alika alika belza
saka mihazona ny rambony ao ambadika
fifangaroana yorkie sy maltese amidy
mpiandry aostraliana ary mpiandry ondry australianina mini